Wasiirro ka socday Koonfur Afrika iyo Musambiik oo Muqdisho booqday
Loading...	Home Wararka Wasiirro ka socday Koonfur Afrika iyo Musambiik oo Muqdisho booqday
Wasiirro ka socday Koonfur Afrika iyo Musambiik oo Muqdisho booqday	Thursday, 10 May 2012 13:40	Wafdi ay hoggaaminayaan wasiirro ka socda dalalka Koonfur Afrika iyo Musambiik ayaa maanta booqday Muqdisho iyagoo la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali lana hadlay odayaasha-dhaqanka ee ku shirsan Muqdisho.
Wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Koonfur Afrika ayaa qudbad u jeediyay odayaasha, isagoo u sharaxay dastuurka Koonfur Afrika ee 1994-kii kaasoo uu sheegay in loo sameeyay ergo sidan oo kale ansixisa, balse 1996-kii ay codkooda u qaadeen dadka Koonfur Afrika. Isagoo odayaasha ugu baaqay inay muhiimad weyn siiyaan dastuurka ayna ogaadaan qiimaha uu leeyahay, wuxuuna ku bogaadiyay odayaasha inay hormuud ka noqdaan dadaallada Soomaaliya. Kulanka kaddib ayaa waxaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Koonfur Afrika. Iyadoo ra’iisul wasaaruhu uu u sheegay saxaafadda sheegay in dowladaha Koonfur Afrika iyo Musambiik ay ka wada-hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo iyaga u dhexeeya.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in sidoo kale dalka Musambiik uu soo maray dagaal sokeeye oo dhexdooda ah kaasoo qaatay 16-sano kaddibna ay ka baxeen dagaaladii sokeeye, wuxuuna xusay inay rabnaa in inagoo qibradaas ka faa'iideysanayna aan xilligaan xasaasiga ah dalkeenna ku nabadeyno
DOWLADA CANADA OO SAFIIR U SOO MAGACAAWDAY DALKA SOMAALIYA
MOOSHIN AY GUDBIYEEN QAAR KA MIDA XILDHIBAANADA OO CODKA KALSOONIDA LOOGU WAYDIINAYO R/WASAARAHA SOM
XAALADII UGU DAMBEEYSAY AY KALA KULMEEN ODAYAASHII KU SIRMAY SHIRKII KISMAAYO IYO XAALADA OO KACSAN